Flexible Pass ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ
Flexible Pass ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Flexible Pass ၏ platform တစ်ခုခုကို အသုံးမပြုမီ တွင် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းချက်များကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်အပ်ခံပါသည်။ အထက်ပါ platform ဆိုသော စကားရပ်တွင် Flexible Pass မှလွှင့်တင်ထားသော Flexible Pass ၏ website, Flexible Pass ၏ software တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အခြား Flexible Pass နှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ်သည့် သို့မဟုတ် ပေးအပ်သည့် မည်သည့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုမဆို အကျူံးဝင်ပါရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤစည်းကမ်းချက်များသည် အသုံးပြုသူသင် (ယခုမှစ၍ “You” ဟုသာခေါ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး) Flexible Pass ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Flexible Pass ၏ platform အသုံးပြုမှုများအတွက် Flexible Pass Company Limited (ယခုမှစ၍ “Company” ဟုသာခေါ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။) တို့အကြားတွင် သဘောတူစာချုပ်သကဲသို့ ဥပဒေအရ စည်းနှောင်းအားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁ You မှ Company ၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် platform ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို You မှ လက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုအချိန်မှစ၍ Company နှင့် You တို့ကြားတွင် ဤစည်းကမ်းချက်များသည် စာချုပ်တစ်စောင်ချုပ်ဆိုသကဲ့သို့ သဘောတူညီမှုအဖြစ်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရလည်း စည်းနှောင်းအားရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်မှ ဤစည်းကမ်းချက်များကို သဘောမတူပါက Company ၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် platform ကို အသုံးပြုမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ၁.၂ Company အနေဖြင့် You မှ ဤစည်းကမ်းများကိုသဘောတူလက်ခံပါက Company မှ ပေးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု နှင့် platform ကို သင့်အားအသုံးပြုခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁.၃ ဤစည်းကမ်းများနှင့် အတူ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒ ကိုလည်းတွဲ၍ ဖတ်ရှုရန် လိုအပ်ပြီး၊ ထို သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒ မှာ ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်မှ Company ၏ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် platform ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ထို သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒ ကို လက်ခံပြီး ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ Company မှ မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်မျာား
4.7 You are not allowed to transfer your Flexible Pass membership and the Flexible Pass points you have to another user.
၄.၈ Company မှ You ထံသို့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွက် Promotion Code ကို သင့်ထံသို့ ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကမ်းလှမ်းမှုတွင် သက်ဆိုင်ရာ Promotion Code တစ်ခုခြင်းဆီအလိုက် သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို Promotion Code များကို အခြားတစ်ယောက်ယောက်သို့လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးထုတ်ယူခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ပြင် Promotion Code တစ်ခုခြင်းဆီအား သီးခြားသွား အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားတစ်ခုခုနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခွင့်လည်း မရှိပါ။
၅.၁ Platform ပေါ်တွင် You ပေးထားသောအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ကြောင်းကို You မှ ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။ ထိုပြင် ထိုအချက်အလက်များကို အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေရန် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်လည်း You မှ ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
၅.၂ Platform ကို အသုံးပြုသည့်အပေါ်တွင် Internet စရိတ်အပါအဝင် အခြားသောကုန်ကျစရိတ်များမှာ You တာဝန်ဖြစ်သည်ကို You မှ သိရှိပါသည်။
i. contains or installs or introduce anything (including but not limited to any virus, worms, malware, Trojan horses and/or any other content) that may compromise, damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate anything on the Platform; or
ii. act any other unauthorised usage on the Platform.
၆.၁ You အနေဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော်အချက်များနှင့် ဆက်စပ်ပြီးသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသည့်အပေါ်တွင် နစ်နာကြေး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ရှေ့နေခအပါအဝင် အခြားမည်သည် တောင်းဆိုမှုမျှကို Company သို့လည်းကောင်း၊ Company နှင့် ဆက်စပ်သူများကိုလည်းကောင်း၊ Partners များကိုလည်းကောင်း၊ Company ဒါရိုက်တာများကိုလည်းကောင်း၊ Company ရှယ်ရာဝင်များကိုလည်း၊ အလုပ်သမားများကိုလည်းကောင်း၊ ကိ်ုယ်စားလှယ်များကိုလည်းကောင်း၊ အလုပ်အပ်နှံထားသူများကိုလည်းကောင်း၊ ယုံမှတ်အပ်နှံထားများကိုလည်းကောင်း၊ အကြံပေးများကိုလည်းကောင်း၊ ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူများကိုလည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုနိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပါက ထိုအခွင့်အရေးကိုစွန့်လွှတ်ပါသည်။ ထိုတောင်းဆိုနိုင်သည့် အခွင့်အရေးဆိုရာတွင် ဥပဒေအရတောင်းဆိုနိုင်သည့်အခွင့်အရေးပါဝင်ပါသည်။
(က) You မှ Platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း
(ခ) You မှ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒ နှင့် ဤစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း သိုမဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊
(ဂ) You နှင့် Partners များဆက်ဆံမှု (ထိုစကားရပ်တွင် Partners များမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အခြားစာချုပ်ဝင်မဟုတ်သူ တစ်ယောက်ယောက်မှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများလည်း ပါဝင်သည်)
(ဃ) You ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊
(င) You နှင့် အခြားအသုံးပြုသူများဆက်ဆံမှု၊
(စ) You အကောင့်ကိုအသုံးပြုသည့် အမည်နှင့် လျှိုဝှက်နံပတ်ကို သုံးပြီး အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်က platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း၊
(ဆ) You အကောင့်ကိုအသုံးပြုသည့် အမည်နှင့် လျှိုဝှက်နံပတ်ကို သုံးပြီး အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ဤစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၇.၁ Platform နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် အသိဉာဏပစ္စည်း များကို Company မှသာ တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
၇.၂ You အနေဖြင့် platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခွင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အသုံးပြုခွင့်မှာ You အတွက် အသုံးပြုခွင့်ဖြစ်ပြီး၊ You စီးပွားရေးအရသော်လည်းကောင်း You တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း မဟုတ်ကြောင်း You မှ သိရှိနားလည်လက်ခံပါသည်။ ထိုပြင် You မှ တစ်ခြားတစ်ယောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခွင့် မရှိကြောင်းကိုလည်း You မှ သိရှိပါသည်။
၇.၃ “Flexible Pass” ၊ “Your Fitness, Your Choice” စကားလုံးများနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို Company မှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ You အနေဖြင့် ထိုစကားလုံးနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို Company မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဖော်ပြခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း လုပ်ခွင့် မရှိကြောင်းကိုလည်း You မှ သိရှိလက်ခံသဘောတူပါသည်။
၇.၄ အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အမည်တစ်ခုခုကို Company မှ ဖော်ပြထားခြင်းသည် ထို အမှတ်တံဆိပ်သုံးစွဲခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဆိုပါ ပစ္စည်းပိုင်ရှင် ၏ အကျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။
Company မှ တာဝန်မရှိခြင်း
၈.၁ Platform ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ကြောင်း Company အနေဖြင့် ပြည့်ဝစွာမှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကတိမပြုပါ။
၈.၂ သို့သော် မှန်ကန်အောင် Company မှ ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုးစားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိ အဆိုပါအချက်အလက် အမှားတစ်ခုတစ်ခုအတွက် Company ၌ တာဝန်မရှိကြောင်းကို You သိရှိနားလည်သဘောတူပါသည်။
၈.၃ Company အနေဖြင့် platform ကို You မှ ၂၄ နာရီပတ်လုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၂၄ နာရီပတ်လုံး အမြဲတမ်းရရှိမည်ဟု Company မှ တာဝန်ယူခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း You မှ နားလည်လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၈.၄ Company အနေဖြင့် platform ကို နည်းပညာဆိုင်ရာတစ်ခုခု ထိန်းသိမ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း You မှ platform ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို နားလည်လက်ခံပါသည်။ ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိ Company အနေဖြင့် အဆိုပါ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကာလအတွက် တာဝန်မရှိကြောင်းကို You မှ နားလည်လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၈.၅ Platform မှာ You အသုံးပြုသည့် Hardware သို့မဟုတ် Software တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါမည်ဟု Company မှ တာဝန်မခံနိုင်ပါ။ ထို့ပြင် You ၏ platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူသုံးစွဲခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီကြောင်းကိုလည်း Company မှ တာဝန်မခံပါ။
၈.၆ Company အနေဖြင့် Partners များ၏ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုဝန်ဆောင်မှုများမှာ ကောင်းမွန်နေပါမည်ဟု Company အနေဖြင့် တာဝန်မခံပါ။
၉.၁ Platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့် မည်သည့်နစ်နာမှာမျှ ဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည်အထိ You အပေါ်တွင် Company သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများ သို့မဟုတ် Company အစုရှယ်ယာရှင်များ သို့မဟုတ် Partners များ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် အလုပ်အပ်နှံထားသူများ သို့မဟုတ် Company လက်အောက်ခံ company များမှ တာဝန်မရှိပါ။
စာချုပ်ဝင်မဟုတ်သူသို့ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြေညာ
၁၀.၁ Platform ပေါ်တွင် ကြေညာသို့မဟုတ် အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၄င်း၏ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ကိုဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Platform သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဆိုပါ ကြေညာသို့ ဖော်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိရန်သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြေညာ သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်သည် Company နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ အချက်အလက်ကို သင့်မှ ဝင်ရောက်ခြင်းသည် Company နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အဆိုပါ ကြေညာ သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်သည် မှန်ကန်မှု ရှိပါသည်ဟု Company မှ အာမမခံနိုင်ပါ။ ထိုသို့ ကြေညာ သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက်တို့အား You မှ လက်ခံရယူလိုခြင်းမရှိပါက Company အား စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ email သော်လည်းကောင်း အကြောင်းကြား တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၁၁.၁ Platform နှင့် ပတ်သက်ပြီး You ၏ အကြံပြုချက်များအား Company သို့ email ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် Company မှ You အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါမည်ဟု တာဝန်မခံပါ။
၁၁.၂ Company အနေဖြင့် You ထံသို့ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ email ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ platform ပေါ်တွင် အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းကို You မှ နားလည်လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၁၁.၃ Company သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည် လိပ်စာမှာ အခန်းအမှတ် (၁၁/င)၊ ၁၀ လွှာ၊ တိုက်အမှတ် ၁၇၈၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် Email မှာ info@flexiblepass.com ဖြစ်ပါသည်။
၁၂.၁ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒနှင့် ဤစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက Company ၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သင်အားအကြောင်းမကြားဘဲ Company မှ You အကောင့်အားဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် Company မှ You အပေါ်တွင် မည်သည့်တာဝန်မျှမရှိပါ။ ထို့ပြင် ထိုသို့ You မှာ ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် Company မှ You အပေါ်တွင် နစ်နာကြေးတောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်ကိုလည်း You မှ နားလည်လက်ခံသဘောတူပါသည်။
၁၃.၁ ဤစည်းမျဉ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ အာဏာလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Company နှင့် You အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက နှစ်ဦးပြေလည်စွာ ညှိုနှိုင်းဖြေရှင်းကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အငြင်းပွားမှုမှာ ပြေလည်သွားခြင်းမရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ တရားရုံးရှေ့မှောက်တွင် ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃.၂ ဤစည်းမျဉ်းများသည် Company နှင့် You သဘောတူညီချက်အားလုံးဖြစ်ပါသည်။
၁၃.၃ ဤစည်းမျဉ်းထဲမှ တစ်ခုခုသည် ဥပဒေအရ စည်းနှောင်းအားမရှိပါက ကျန်စည်းမျဉ်းများသည် ဥပဒေအရ စည်းနှောင်းအား ဆက်လက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃.၄ You အနေဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းများကို အခြားတစ်ယောက်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း Company အနေဖြင့် လွှဲပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၁၃.၅ မမြင်နိုင်စွမ်းသော အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့် Company သို့မဟုတ် You မှ လုပ်ဆောင်ရမည်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ထိုမလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
၁၃.၆ ဤစည်းမျဉ်းများကို ဖျက်သိမ်းပြီးသော်လည်း ဤစည်းမျဉ်းများထဲမှ မဖြစ်မနေ ဆက်လက်တည်ရှိရန်လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းတစ်ခုခုရှိပါက ထိုစည်းမျဉ်းသည် မပျက်ပြယ်ဘဲ ဆက်လက်အတည်ဖြစ်လျှက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။